Abavelisi be-ST zirconia block - i-china ST zirconia block factory kunye nababoneleli
I-Cad Cam ST iZirconia Ibhloksi engu-98mm yeYucera yeeLebhu zamazinyo kunye nezixhobo zamazinyo
1.Ukuhambelana ngokufanelekileyo. Ayinakucaphuka, ayidibani neentsini, kwaye akukho mgca umnyama weentsini. Kufanelekile kakhulu kwisisu somlomo kwaye kuthintele ukungezwani komzimba, ukucaphuka, ukubola kunye nezinye izinto ezingathandekiyo ezibangelwa ngamazinyo emveli e-porcelain kwisisu somlomo.
2. Umzimba wamazinyo unamandla aphezulu kunye nobulukhuni. Ukuxhathisa okungafaniyo kokuphuka kunye neepropathi zokunyanga ezomeleleyo emva kokuphuka kwenza izinyo lomelele.
I-YUCERA Izixhobo Zobuxoki Zamazinyo kwiLebhu yamazinyo ye-CAD ye-CAM yeNkqubo yamazinyo e-Zirconia Block
I-zirconia ehambelana ngokugqibeleleyo okanye i-zirconia efanelekileyo yeyesithsaba esipheleleyo kunye neebhlorho
Ukuhamba okuphezulu kokukopisha okuqhelekileyo kunye nebhulorho
Ukuhamba kwe-Ultra okungaphandle